Villa Somalia oo Albaabadda loo laabay - Awdinle Online
Villa Somalia oo Albaabadda loo laabay
March 27, 2020 (Awdinle Online) – Warar lagu kalsoon yahay oo hadda naga soo gaaray xarunta Madaxtooyadda dalka ee villa soomaliya ayaa sheegey in amar lagu bixiyey inaan lasoo geli karin lagana bixi karin wixii ka dambeeya March 27, 2020 OP ku beegan caawa oo sabti ah.
Amarkan oo si buuxda u bixiyey Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa si deg deg ah u dhaqan gala durbadiiba.
Xaaladan xayiraada ah ayaa sabab looga dhigey cudurka cusub ee coronavirus oo laga heley ilaa sedax qof oo ku sugan magaaladda Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya, sida ay xaqiijisey Wasiirla Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka ah.
Labo maalinta ayaa la fasaxay inta badan shaaaalaha xarunta madaxtooyadda, hase ahaa maanta gelinkii dambe waxaa muuqaal digniin ah oo ku saabasan coronavirus soo duubay Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleDhageyso :-Madaxweyne Lafta-gareen oo war ka soo saaray marxaladdii deyn cafinta Soomaaliya
Next articleSomalia Send Doctors to Italy to fight for COVID-19